Septemba 2021 - SunTrust Blog
Ọnwa: September 2021
140 Mbibi Oge Ochie Gburugburu Ụwa na Ebe Ha Kpọrọ
By Victoria Akpan TMLT September 24, 2021 Travel 0 Comments
- Mkpọmkpọ ebe oge ochie gburugburu ụwa - mkpọmkpọ ebe oge ochie n'akụkụ ụwa niile na -enye ọmarịcha ihe gara aga, na -ekpughe etu ndị mmadụ siri bie, oghere ha nwere, na ihe ha na -eme kwa ụbọchị. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme, ndị na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ, na ndị njem nleta na -eju anya na ihe ndị a ...
Ihe ị ga -eme na West Virginia iji nụ ụtọ ezumike gị
- Ihe a ga -eme na West Virginia - West Virginia bara ọgaranya na akụkọ ntolite, ọdịbendị, na ntụrụndụ. Na, na ọtụtụ nnukwu ihe ị ga -eme na West Virginia, ọrụ nke imebi usoro njem gị yiri ihe siri ike. Ọ bụrụ na ị na -eche ...
Etu ị ga -esi nweta ikikere azụmaahịa maka azụmahịa gọọmentị etiti, steeti, mpaghara ma ọ bụ ụlọ
- Etu ị ga -esi nweta ikikere azụmaahịa - Ị chọrọ ịma ma azụmahịa gị ọchọrọ akwụkwọ ikike azụmahịa? Ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa, ị ga -ahụrịrị na azụmaahịa gị bụ nke iwu site na ịnweta ikikere azụmaahịa ọ bụla dị mkpa ...